Cob Barn, Longmeadow Farm, Shaldon - Devon - I-Airbnb
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Hannah
I-Cob Barn iyingobo esanda kuguqulwa enezitezi ezimbili evalekile. Isitezi esiphansi sinekhishi lepulani elivulekile, indawo yokuhlala, isidlo sakusihlwa, ikamelo lokulala lamawele kanye negumbi lokugeza elihlukile. Phezulu kunegumbi lokulala eliphindwe kabili eline-en-suite yokugezela.
Lesi sibaya esisanda kuguqulwa sitholakala endaweni yomndeni wethu, ipulazi elingamahektare angama-80 kanye nendawo yokukhempa, enikeza ukubukwa komfula iTeign kanye nokuhamba ibangana nje ukuya eShaldon Beach.
I-Cob Barn iyikotishi elizimele elinezitezi ezimbili, elisenkabeni yepulazi, eduze ne-Old Piggery. I-Cob Barn kanye ne-Old Piggery zabelana ngengadi kanye nevulandi ngenkathi zinikeza ubumfihlo kwamanye amakotishi.
I-Ground Floor inekhishi lepulani elivulekile, indawo yokuhlala, isidlo sakusihlwa esinothayela phansi. Indawo yokudlela izihlalo ezine. Ikhishi linohhavini wegesi, i-gas hob, i-microwave, ifriji/ifriji, umshini wokuwasha izitsha nomshini wokuwasha.
I-Bedroom 2 iphansi phansi inemibhede engamawele kanye neFreeview TV kanye negumbi lokugeza elihlukile eline-shower cubicle, indlu yangasese kanye nesitimela sethawula elishisayo.
I-First Floor inikela ngeBedroom 1 enombhede ophindwe kabili, iFreeview TV, iwindi leVelux, usilingi othambekile kanye ne-en-suite eneshawa phezu kokugeza, nendlu yangasese.
Ukushisa okuphakathi kwegesi (phansi phansi), ugesi kanye ne-Wi-Fi ifakiwe. Indawo yokupaka yangasese yezimoto ezi-2.
4.94 · 55 okushiwo abanye
Idolobhana laseShaldon linokhetho lwezindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela ezinokuthile kwawo wonke umuntu. Futhi ibhusha, ababhaki kanye nesitolo esincane sakho konke okubalulekile kwakho.
Sihlala endlini yasepulazini esizeni ngakho-ke sihlala sitholakala nganoma yimiphi imibuzo noma imibuzo, noma kunjalo amakotishi wonke anokufinyelela kwangasese ukuze uzenzele ekhaya futhi uphumule.